Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeersa Lafootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 8 darbe. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodina Shawaa Lixaa aanaa Ejeersa Lafootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 8 darbe.
OBN Fulbaana 16,2014-Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeersa Lafootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 8 darbe.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeersa Lafootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 8 darbuusaa To’ataan Olaanaa Poolisii Tiraafika Aanaa Ejeersaa Lafoo Saajin Fiqaaduu Mulugeeta beeksisan.
To’ataan Olaanaa Poolisii Tiraafika Aanaa Ejeersa Lafoo Saajin Fiqaaduu Mulugeeta akka himanitti, balaan tiraafikaa kun kan dhaqqabe guyyaa kaleessaa galgala yoo ta’uu, aanichatti naannoo laga Hulluuqqoo jedhamutti akka ta’es himaniiru.
Konkolaataan lakkoofsi gabteesaa 3-30485 Oro jedhamu magaalaa Finfinneerraa gara Ginciitti imalaa kan ture yoo ta’uu, Miniibaasii ummata imalchiisuu lakkoofsi gabateesaa 3-52989 Magalaa Amboorraa gara Magaalaa Finfinneetti osoo imalaa jiru walitti bu’uun balaan kun dhaqqabuu akka danda’es himaniiru.
#Balaa_Gaddisiisaa Magaalaa Sabbataa iddoo Diimaa jedhamuttii balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 11 darbera. Balichi…
#KAABA_OROMIYAA_Walloo_Aanaa_Baatee Shiftoonni Adaalii fi finxaaleeyyiin naf×nyaa duula lafa babal'ifannaa irratti bobba'anii jiran ganda qotee bulaa…